Imbali yoMthendeleko woMculo we-Woodstock ka-1969
Indlela abaQulunisi beMthendeleko abayenze ngayo iMbali naphezu kweengxaki
UMthendeleko we-Woodstock wawuyi-konsathi yeentsuku ezintathu (eyayijikeleza ngosuku lwesine) ebandakanyeka ubulili obuninzi, iziyobisi kunye ne-rock-n roll - kunye nodaka oluninzi. UMthendeleko woMculo we-Woodstock we-1969 ube yi-icon ye-hippie counterculture yama-1960.
Imihla: Agasti 15-18, 1969
Indawo: Ifama yaseMax Yasgur yobisi kwidolophu yaseBheteli (ngaphandle kweNxweme e-White, eNew York)
Eyaziwayo njenge: Woodstock Music Festival; Ukuboniswa kwe-Aquarian: Iintsuku ezintathu zoxolo noMculo
Abaququzeleli boMthendeleko we-Woodstock babengamadoda amane aselula: uJohn Roberts, uJoel Rosenman, u-Artie Kornfeld kunye noMike Lang. Omdala kunabo bonke babeneminyaka engama-27 ubudala kuphela ngexesha leMthendeleko we-Woodstock.
URoberts, uyindlalifa yerhafu yeyeza, kunye nomhlobo wakhe uRosenman befuna indlela yokusebenzisa imali kaRoberts ukutyalomali kwimbono eya kubabangela imali engakumbi. Emva kokubeka isikhangiso kwiThe New York Times esathi: "Amadoda amancinci anemali engenamkhawulo efuna ukuzonwabisa, amathuba okutyalo-mali kunye neziphakamiso zoshishino," badibana neKornfeld kunye neLang.
ISicwangciso soMthendeleko we-Woodstock
Isiphakamiso sokuqala saseKornfeld kunye neL Lang kwakuyi-studio yokurekhoda kunye nokuhlaselwa kwabaculi beedolophu e-Woodstock, eNew York (apho uBob Dylan kunye nabanye abaculi behlala khona). Iingcamango zenzeke ekudaleni iikontoni zamatye eemini ezimbini zabantu abangama-50,000 benethemba lokuba ikhonkethi iya kuphakamisa imali eyaneleyo yokuhlawula isicdiyo.
Abafana abane baqala ukusebenza ekuhleleni umkhosi omkhulu womculo. Bafumene indawo yeso siganeko kwipaki yezoshishino esiseWallkill, eNew York.
Bathi banyathelisa amathikithi (i-$ 7 ngosuku olunye, i-$ 13 ngeentsuku ezimbini, kunye ne-$ 18 iintsuku ezintathu), ezingathengwa kwiindawo zokugcina okanye ngeposi.
La madoda asebenze ekuhleleni ukutya, asayine abaculi, kwaye aqeshise ukhuseleko.
Izinto Ziya Kubi kakhulu
Eyokuqala kwezinto ezininzi ukungahambi kakuhle kunye noMthendeleko weWoodstock. Kungakhathaliseki ukuba amantombazana kunye namagqwetha abo awakhupha njani, abantu baseWallkill abazange bafune isiqhwenga sezilwanyana ezidakamizwa behla kwidolophu yabo.
Emva kokungqubuzana okukhulu, idolophu yaseWallkill yadlulisela umthetho ngoJulayi 2, 1969, owawuvimbela ngokufanelekileyo ikhonkethi ukusuka kwindawo yakubo.
Wonke umntu obandakanyekayo noMthendeleko weWoodstock wamotya. Izitolo zavuma ukuthengisa ezinye iikiti kwaye iingxoxo kunye neemvumi zazingena. Kuphela inyanga-nesiqingatha ngaphambi kokuba uMthendeleko weWoodstock uqalise, kwakufuneka kufumaneke indawo entsha.
Ngenhlanhla, phakathi noJulayi, ngaphambi kokuba abantu abaninzi baqale ukufuna imali yokubuyisela ityitile yabo, uThamas Yasgur wanikela ngefama yakhe yeehektare ezingama-600 eBethel, eNew York kwindawo yokulungiselela uMthendeleko we-Woodstock.
Njengenhlanhla njengoko abaququzeleli bebefumene indawo entsha, utshintsho lokugqibela lwendawo lubeka ngokucacileyo umgca wexesha loMthendeleko. Izivumelwano ezintsha zokurenta iifama zobisi kunye neendawo ezikufutshane kwakufuneka zenziwe kwaye zivumele ukuba kuvunyelwe uMthendeleko we-Woodstock edolophini.
Ukwakhiwa kwecandelo, indawo yokudlala, iindawo zokupaka, iindawo zokumisa, kunye nebala lokudlala abantwana bonke baqala ukuqala kwaye abazange baqeshwe ngexesha lokulungiselela umcimbi. Ezinye izinto, njengezitekithi zethikithi kunye namasango, azizange zigqitywe ngexesha.
Njengoko umhla usondele, kukho iingxaki ezininzi. Ngokukhawuleza kubonakale ukuba abantu abayi-50,000 baqikelele ngendlela ephantsi kakhulu kwaye ukuqikelela okutsha kwenyuka kwabangaphezu kwama-200,000 abantu.
Abafana bazama ke ukungenisa izindlu zangasese ezingaphezulu, amanzi amaninzi kunye nokutya okunye. Nangona kunjalo, abathengi bokutya baqhubeka besongela ukucima umzuzu wokugqibela (abaququzeleli baye baqeshisa ngengozi abantu abangazange bafumane amava) ngoko bekufuneka baxhalabe malunga nokuba ngaba bengenako ukuhamba ngeefom elayini njengento yokutya yokulondoloza.
Kwakhona ukuxhatshazwa kwimizuzu yokugcina yamagosa asepilini angasebenzi emsebenzini wokusebenza kwiMthendeleko yeWoodstock.
Amakhulu amawaka amawaka afika kwiMthendeleko yeWoodstock
NgoLwesithathu, ngo-Agasti 13 (iintsuku ezimbini ngaphambi kokuba uMthendeleko uqalise ukuqala), bekusele phantse abantu abangama-50,000 abaye bamisa amatye kufuphi nesigaba. Laba bafikelele kwangaphambili bahamba behamba ngokukhawuleza kwiingcambu ezinkulu kwicingo apho amasango awazange abekwe khona.
Ekubeni kwakungekho ndlela yokufumana abantu abangama-50,000 ukuba bahambe kuloo ndawo ukuze bahlawule amathikithi kwaye bekungekho ixesha lokumisa amasango amaninzi ukukhusela abantu abaninzi ukuba bangene nje, abaququzeleli baphoqelelwe ukuba benze isiganeko sikhululekile kwikonsathi.
Esi simemezelo sekhonsathi yamahhala sineempembelelo ezimbini ezibalulekileyo. Eyokuqala apho abaququzeleli bayeza kulahleka imali eninzi ngokubeka esi siganeko. Isiphumo sesibini kukuba njengoko iindaba zazisasaza ukuba ngoku i-concert ekhululekile, abantu abaqikelelwa ukuba bahamba baya eBethel, eNew York.
Amapolisa kufuneka aphendule amawaka eemoto. Kulinganiselwa ukuba abantu abangaba ngu-500,000 ngokwenene bayifake kwiMthendeleko ye-Woodstock.
Akukho mntu wayecwangcise isiqingatha sezigidi zabantu. Iindlela ezikuloo ndawo zenzeke ngokupaka iimoto njengoko abantu beyishiya imoto yabo phakathi kwesitrato baze bahamba umgama wokugqibela kuMthendeleko we-Woodstock.
I-traffic yayimbi kangangokuthi abaququzeleli babefanele baqeshe ii-helicopter ukuvalela abaqhubi beehotele zabo ukuya kwinqanaba.
Ngaphandle kwazo zonke iingxaki zabaququzeleli, uMthendeleko we-Woodstock waqalisa phantse ngexesha. NgoLwesihlanu kusihlwa, ngo-Agasti 15, uRichie Havens wenyuka kwisigaba kwaye waqalisa ngokusemthethweni uMthendeleko.
I-Sweetwater, uJoan Baez , kunye nabanye abaculi beentlanga baphinde badlala ngoLwesihlanu ebusuku.
Umculo waqala kwakhona emva nje kwemini ngoMgqibelo kunye ne-Quill kwaye waqhubeka engazange ayeke kude kube ngeCawa ekuseni nge-9 ekuseni. Umhla weengxowa ze-psychedelic zaqhubeka kunye nabaculi abafana no- Santana , uJanis Joplin , Uxabiso lokufa, kunye no-Who, ukubiza nje ezimbalwa .
Kwacaca kuwo wonke umntu ukuba ngeCawa, uMthendeleko weWoodstock wawuhla. Ininzi yesihlwele ishiywe yonke imini, ishiya abantu abangaba ngu-150 000 ngeCawa ebusuku. Xa uJimi Hendrix, umculi wokugqibela edlalwa eWoodstock, wagqiba ukusekwa kwakhe ekuseni ngoMsombuluko ekuseni, isihlwele sasingaphantsi kwama-25,000 kuphela.
Ngaphandle kwemizila engama-30 emininzi yamanzi kunye neyure ubuncinane ukulinda ukusebenzisa indlu yangasese, uMthendeleko we-Woodstock waba yimpumelelo enkulu. Kwakukho ezininzi iziyobisi, ubuninzi besini kunye nobunqunu, kunye nodaka oluninzi (oludalwe yimvula).
Emva koMthendeleko we-Woodstock
Abaququzeleli be-Woodstock babesondeza ekupheleni kweMthendeleko ye-Woodstock. Abazange babe nexesha lokugxila kwinto yokuba beyidala imicimbi yomculo ethandwa kakhulu kwimbali, kuba baqala ukujongana neengxowa zabo ezingaphezulu (ngaphezu kwezigidi eziyi-1) kunye nezigwebo ezingama-70 ezazifakwe kuzo.
Ukukhululeka kwabo, ifilimu yoMthendeleko weWoodstock yaba yintlawulelo ye-movie kunye neenzuzo ezivela kwi-movie zifake i-chunk enkulu yetyala kuMthendeleko. Ngelo xesha yonke into ehlawulwa ngayo, babeyi-100 000 yee-matyala.
Umntu Wokuqala Esikhathini: Yuri Gagarin
Umntu Wokuqala Ngenyanga
Ieholide zeJanuwari eziyingqayizivele kunye neNdlela zoKonwabo zokuBhiyozela
I-Vice Presidential Debate Memes
Yintoni eyahlukileyo phakathi kweMisa kunye noMqulu?
20 Ukumangaliswa kweMnyama ngoLwesihlanu iMemes eyakwenza i-LOL
Amanqanaba eSebenzi lokuSebenza ngeSisombululo
I-Juliet - Inkcazo Yomntu
I-Rollins College Admissions
Adan College Admissions
I-Foo Fighters I-Biography kunye neProfayili
Indlela yokunceda abangenamakhaya
Isingeniso sokusebenzisa i-Gerunds
Gcina i-Campaign Camproom yeCandelo leeNgcipheko
Yintoni ezo Zithetha Ngokuqinisekileyo Iifoto Zama-Facebook?